Kristianisma karismatika - Wikipedia
Hanokatra ny renilisitra
Hamaky amin'ny fiteny hafa
(tonga teto avy amin'ny Fihetsiketsehana karismatika)
Ny Kristianisma karismatika na Fihetsiketsehana karismatika dia endriky ny kristianisma sy vondron'ny fifohazam-panahy nanandratra avo ny asan'ny Fanahy Masina sy ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina ary ny fahagagana araka izay hita indrindra ao amin'ireo Epistily nosoratan'i Paoly. Io fifohazam-panahy io dia niseho tamin'ny alalan'ny fihetsiketsahana telo, dia ny pentekotisma tamin'ny taona 1906 sy ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika tamin'ny taona 1960 ary ny fihetsiketsehana karismatika vaovao tamin'ny taona 1980. Araka ny tarehimarika nomen'ny World Christian Encyclopedia dia miisa 78 000 000 ny Pentekotista, ny Karismatika evanjelika miisa 192 000 000 ary ny Karismatika vaovao miisa 318 000 000 ka izany rehetra izany dia mitotaly 588 000 000. Araka ny Pew Research Center tamin'ny taona 2011 dia miisa 584 000 000 ny Pentekotista sy ny Karismatika ka ny 279 000 000 Pentekotista fa ny 305 000 000 kosa dia Karismatika.
2 Ny Pentekotisma
3 Ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika
4 Ny fihetsiketsehana karismatika vaovao
Ny teny hoe karismatika dia avy amin'ny teny grika hoe χάρισμα / kharisma izay midika hoe "fanomezana", izay avy amin'ny teny grika hafa hoe χάρις / kharis izay midika hoe "fahasoavana".
Ny Pentekotisma dia finoana kristiana vokatry ny Fifohazam-panahy notarihin'ny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia tamin'ny taona 1906. Io fihetsiketsehana io dia manana izao toetra izao: manome lanja manokana ny Baiboly, ny fahateraham-baovao, ny batisan'ny Fanahy Masina, ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina, ny batisan'ny olon-dehibe (batisan'ny mino), ny fananana saina tia mamita iraka, ny fanokanan-tena ara-pitondran-tena amin'ny fiainana, ny fahaleovan-tenan'ny fiangonana isan-toerana, ny fisarahan'ny Fiangonana sy ny Fanjakana. Niisa any amin'ny 279 000 000 any ho any ny mpino pentekotista tamin'ny taona 2011 araka ny tarehimarika nomen'ny Pew Research Center.
Ny fihetsiketsehana karismatika evanjelikaHanova
Ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika na fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara dia firehan'ny kristianisma evanjelika (na evanjelisma) izay manandratra avo ireo fanomezan'ny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia tamin'ny taona 1960 izy io ka nisy akony tao amin'ny fiangonana rehetra na protestanta na katolika na evanjelika ary nandray anjara tamin'ny fiforonan'ny fiangonana evanjelika tsy miankina maro. Miavaka amin'ny pentekotisma io fihetsiketsehana io noho izy tsy manao ny fiteny tsy fantatra ho hany porofon'ny batisan'ny Fanahy Masina izay nambaran'i Jesosy mialoha sady manome toerana lehibe ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina. Araka ny tarehimarika nomen'ny Pew Research Center dia ahitana mpino miisa 305 000 000 io fihetsiketsehana io tamin'ny taona 2011.
Ny fihetsiketsehana karismatika vaovaoHanova
Tany Etazonia no niforonan'ny Fihetsiketsehana karismatika vaovao tamin'ny fiantombohan'ireo taona 1980. Ivon'ny finoany ny Batisan'ny Fanahy Masina araka ny fanambaràn'i Jesosy Kristy sy ireo fanomezam-pahasoavana sivy avy amin'ny Fanahy Masina. Mampiasa ny fitaovan-tserasera vaovao ireo Fiangonana karismatika vaovao. Noraisiny ny teolojian'ny Fihetsiketsehana karismatika evanjelika nefa nohamafisiny sy notovanany amin'ny atao hoe "ady ara-panahy" sy "tenim-pinoana" ary "fanavaozana ara-drafitra".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma_karismatika&oldid=975066"
Dernière modification le 29 Septambra 2019, à 17:10
Mitondra ny lisansa CC BY-SA 3.0 ny votoatiny raha tsy misy zava-kafa ambara.
Voaova farany tamin'ny 29 Septambra 2019 amin'ny 17:10 ity pejy ity.